लामो समय मास्क लगाउँदा मृ’त्यु’सम्मको खतरा;डाक्टर को सुझाव.. – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/लामो समय मास्क लगाउँदा मृ’त्यु’सम्मको खतरा;डाक्टर को सुझाव..
कोरोनाको महामारीले मानिसहरु संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्दछन् । तर कतिपय अवस्थामा त्यहि मास्कले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ ।यदि तपाई पनि मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? लामो समय सम्मप्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान ! यसले तपाईको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।लगातार लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा शरीरमा अक्सिजनको कमी हुने गर्दछ । जसले रगतमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्न जान्छ । यति मात्र होइन, लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा स्वास्थ्यमा अन्य कैंयौ प्रकारको समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।
के के असर पर्दछ त स्वास्थ्यमा ?
४. आम अवस्थामा वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ० दशमलव ०४ प्रतिशत हुन्छ तर यो मात्रा बढेर १० प्रतिशतभन्दा बढि भयो भने यसले ज्यान लिन सक्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट बच्न चिकित्सकहरु एन ९५ मास्क लगाउने सुझाव दिन्छन् । तर मास्क लगाउँदा लगातार लामो समयसम्म लगाउनु हुदैन । अझ दौडदाँ वा छिटोछिटो हिड्दा मास्क लगाउनु हानिकारक हुन्छ । यस्तो बेला मास्क खोल्नु पर्दछ । घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र निस्कनु होला । तर ध्यान रहोस् यो टाइट लगाउनु हुदैन ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****